Raadinta Sida loo qor Letter ah si editor muujinayo dhibaatooyinka jidadka iyo waddooyinka la kulma jaridda biyaha inta lagu guda jiro xilli monsoon ee? Halkan waxaan ku yihiin la Letter ah si editor ah oo ku saabsan dhibaatooyinka jaridda biyaha inta lagu guda jiro xilli monsoon ee magaalooyinka metro sida Delhi.
Subject- Muujinayo dhibaatooyinka jaridda biyaha ee Delhi lagu guda jiro xilli monsoon
Iyada oo wargeys aad soo faragaliso Waxaan doonayaa inaan ka dhaansado dareenka masuuliyiinta walaac xagga dhibaatada jaridda biyaha ee Delhi lagu guda jiro xilli monsoon kasta.
Waxay ahayd waxoogaa cajiib ah si ay u arkaan qaybo ka mid ah jidadka iyo laamiyada badan ee Delhi la baajiyey kaliya dhowr saacadood roobabka go'aysa dhowr maalmood ka hor ka dib. Tani waxa ay muujinaysaa dhibaato weyn nidaamka bullaacadaha ee magaalada. Delhi helo roobab sidan oo keliya dhowr toddobaad ee sanadka lagu jiro bil kasta. Laakiin xitaa markaa magaalada aan laga maarmi waayay in la. Xaaladda ayaa si gaar ah u xun waddooyinka hoose flyovers qaar ka mid ah. wadayaasha badan oo lahaa in ay ka tanaasulaan baabuur ka dib markii uu ku xayiran balliyo biyo ah. Waterlogging loola jeedaa u damaysay ee ciidda biyo. Marka waddooyin cusub ayaa la dhisay, gaar ahaan ku jiifsataa dhulka hooseeya, waxaa muhiim ah in nidaamka bullaacadaha sax ah waxaa la dhigay meel si biyo la si deg deg ah miiro ay dhacdo in roob. Sida isagoo ka mid ah caasimadda ah ee Hindiya, waa incongruous si ay u arkaan waddooyinka daadadku ka dib markii uu roob.
Sanad walba ka roobab culus ka dhigi qaybo ka mid ah magaalada u xanuunsataan ka waterlogging. kaabayaasha biyaha roobka The, haddii ay jirto oo dhan, ma ku filan in la damaanad qaado dheecaan ah oo biyo ah si ay waddooyinka ku jiifsataa dhulka hooseeya is hafiyay. Waddooyinka ayaa xiran taasoo keentay in saxmadda gaadiidka, lugeeyayaasha waxay leeyihiin Salaax jidadka ay daadadku iyo gaar ahaan saboolka magaalooyinka, ku nool isku raranta ama sharci darrada ah ayaa inta badan guryahooda waxyeeleeyeen biyaha, taasoo laga yaabaa inay qaadato maalmo dhowr ah in ay aagaas. Laakiin waterlogging dhaca meel kasta, iyo hadduu ku jiro hodan yihiin ama xaafadaha saboolka ah. warbixinta cimilada wargeyska Sanad kasta ee ku saabsan taariikhda saxda ah marka roobabka ayaa la filayaa inuu ku soo bilowdo iyo haddii monsoon ayaa keenay ka badan ama roob ka yar in sano ka hor in kasta oo ay tahay in hay'adaha ay khusayso ku guuldareystay inuu maareeyo xaaladda.
AKHRI SIDOO KALE: maalin Happy Australia 2018 Rajo, Quotes, SMS, Messages, Images, dharka
Our MCD leedahay khayraad ku filan si ay u maareeyaan xaaladda, laakiin qashinka aan habboonayn daadinta by dadweynaha iyo fashilka of MCD waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee booso is ceejiya qashinka yhay jaridda biyaha. Maxaa yeelay, dadka waterlogging leedahay in ay la kulmaan dhibaatooyin farabadan sida shilalka waddooyinka xitaa dila mararka qaarkood, saxmadda baabuurta, kordhin kaneecada iyo wixii la mid ah. Waxaan rajaynaynaa in Authority Hawlaha Guud dhibaato jaridda biyaha qaadan doonaa si dhab ah oo ay qaataan ku dhaqanka cusub iyo tallaabooyin si looga hortago dhibaatooyin sida mustaqbalka.
maalin Happy Australia 2018 Rajo, Quotes, SMS, Messages, Images, dharka
« top 8 Career Options la Mushaaraadka qaali ah in Hindiya
Maalinta AIDS-ka Adduunka – December 1, 2017 : Qormo, theme, dhigyo, Quotes, Messages, Sida loo dabaal, hadalka »